यौ’न स,म्प,र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले यौ’न स’म्पर्कमा प्र’भाव पार्छ ? – Jagaran Nepal
यौ’न स,म्प,र्क गर्ने उत्तम समय कुन होला ? के समयले यौ’न स’म्पर्कमा प्र’भाव पार्छ ?
एक अध्ययनका अुनसार एक अध्ययनका अुनसारकार्यका लागि वर्षमा सबैभन्दा उत्तम समय जाडोयामको विदाको समय हो । त्यसैले अंग्रेजी महिना डिसेम्बरलाई स’ म्भो गका ला गि उत्तम महिना मानिन्छ । यो महिना आधा मंसिर र आधा पुष पर्दछ । यसर्थ, यो महिनामा जाडो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, विकसित राष्ट्रतिर यो महिनामा धेरै चाडपर्वहरु पर्दछन् र मानिसहरु स्वभाविकरुपमा उत्साहित र रमाइलो मुडमा हुन्छन् ।
क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको अघिपछिका दिनहरु वर्षभरिमै स ‘म्भो गका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय दिनहरु हुन् । स म्भो गका लागि वर्षको सबैभन्दा व्यस्त तेश्रो दिन भने भ्यालेन्टाइन डे हो । जब हप्ताको अन्त्यतिरका तिन दिन लगातार विदा पर्छ मानिसहरु बढि मात्रामा यौ’ न क्रि डा मा सं ल ग्न हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
डिसेम्बरको अन्तिमतिर प्रायः मानिसहरु भ्रमणमा निस्कछन् । बिदा र चाडबाडको बेला मिठो मसिनो खाने प्रचलन जहाँ पनि हुन्छ । जब तपाईं तागतिला वस्तुहरु खानुहुन्छ । तपाईको शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ । शरीरमा शक्ति भरिन्छ । भरपूर केक र चक्लेट खाएपछि यसले यसले स म्भो गको लागि माहोल बनाउँछ । जोडीमा घुम्ने र रमाउनको लागि खास वातावरण पैदा हुन्छ, जसले सम्भोगको लागि सजिलो बनाउँछ ।